24 Imidlalo ebalulekileyo ye-Android ongenakuyiphosa kwiselfowuni yakho | Izikhokelo ze-Android
UIgnacio Lopez Sala | 11/05/2021 08:41 | Imidlalo ye-Android
Umzi mveliso wemidlalo ehambayo ukhula ngokuthe ngcembe kwaye uye waba yiyo Owona mthombo wengeniso kwizifundo ezininzi. Siyabulela oku, kwiVenkile yokudlala esinayo inani elikhulu lemidlalo esinayo, imidlalo yazo zonke iintlobo ezisivumela ukuba sichithe ixesha lokuphumla okanye iiyure ezinde ...
Ukuba awukazikhuthazi ukuba usebenzise i-smartphone yakho njengeqonga lokudlala, kweli nqaku siza kukubonisa ukuba ziyintoni na imidlalo ebalulekileyo ukuba wonke umsebenzisi kufuneka azame ukuhlelwa ngokwamacandelo, ukwenza kube lula ukufumana umdlalo olungele ukuthanda kwakho.
1 Imidlalo yabadlali abaninzi kwi-Intanethi ye-Android
1.1 PUBG Imfono
1.2 Ifowuni yeNkonzo: Ifowuni
2 Isicwangciso semidlalo ye-Android
2.1 Arena yeValor
2.2 kukusebenzi- Royale
2.3 Umgcini wezisele
3 Imidlalo yeqonga ye-Android
3.1 IAlto's Adventure kunye neAlto's Odyssey
4 Imidlalo yeAventure yeAroid
4.2 Impembelelo zeGenshin
4.3 Saga yokugqibela yeFantasy
4.4 Isikhundla seNkohliso eMnyama
5 Imidlalo yokubaleka ye-Android
5.1 I-Asphalt 9: Imithetho
6 Imidlalo yezemidlalo ye-Android
6.1 Ibhola ekhatywayo yeFIFA
7 Imidlalo yekhadi ye-Android
7.1 Amabali e-Runeterra
8 Imidlalo ye-Puzzle ye-Android
8.1 Sika iRope
8.2 Mazes kunye nokunye
Imidlalo yabadlali abaninzi kwi-Intanethi ye-Android
IPUBG Iselfowuni yayi Idabi lokuqala lokulwa ekhutshwe kwizixhobo eziphathwayo, kulandela impumelelo ebeyifumene kwi-PC eyenze ukuba ibe yeyona nto ithengiswa kakhulu kumdlalo wePC kwimbali yemidlalo yevidiyo eneekopi ezizigidi ezingama-43 ezithengisiweyo.
Le mfazwe yasebukhosini ibeka bonke abathathi-nxaxheba kumdlalo (i-100 iyonke) kwaye phi kusele iqela elinye kuphela. Indawo apho isenzo senzeka khona ngokuthe ngcembe siyavala ukuze kuqokelelwe abanye abadlali kwizangqa ezincinci.
Eyona midlalo ilungileyo yabadlali abaninzi ye-Android
Ngaphandle kwendlela yedabi yokulwa, iPUBG Iselfowuni ikwanikezela ezinye iindlela zomdlalo, Iziganeko ezizodwa zexesha elimiselweyo ... Esi sihloko siyafumaneka simahla simahla. Ukuthengwa esikufumanayo kumdlalo kuchaphazela kuphela ubuhle babadlali, kungabonisi naliphi na ithuba elongezelelekileyo.
Umthuthukisi: IBETA ELANDELAYO
Ifowuni yeNkonzo: Ifowuni
Nangona umnxeba womsebenzi: Iselfowuni ibandakanya imo yokulwa edabini, ayisiyiyo imo yomdlalo ebalasele kakhulu, kodwa Umdlalo weqonga olilifa elivela kwiinduduzo. Ngokungafaniyo ne-PUBG Mobile, esi sihloko siyahambelana nabalawuli, ke ukuba unomlawuli wolu hlobo, umdlalo weqonga uyafana kakhulu nowekhonsoli, ngaphandle kwemizobo.
Iimidlalo ezili-9 ezilungileyo kakhulu zentshukumo ye-Android
Esi sihloko siyafumaneka khuphela mahala ngokuthenga kwangaphakathi nohlelo okuchaphazela kuphela ubuhle babadlali, unganiki sibonelelo esongezelelweyo.
Ukufowuna kweDuty®: Iselfowuni
Umthuthukisi: UkuPapashwa kokuSebenza, Inc.
I-Fortnite yenye yemidlalo edlalwa ngokulwa idume kakhulu kwihlabathi liphela edibanisa izinto zokwakha. Ifana nePUBG Imfono, indlela yokulwa yedabi ibeka abadlali abayi-100 kwisiqithi apho lingasinda khona iqela elinye.
Kubasebenzisi abaninzi, uxanduva lokwakha sele lubaphosa ngasemva, nangona kunjalo, akunyanzelekanga ukuba ube yinjineli Ukuze sikwazi ukonwabela esi sihloko sikwasinika nezinye iindlela zomdlalo ezinje ngobuchule, apho abadlali abaninzi banokwenza iziqithi zabo kunye nokuzilolonga.
Iimidlalo ezili-10 ezifanayo kakhulu kwi-Fortnite
Kukho imowudi engama-20 vs 20 apho lonke ixesha sisifa, sibuyela emdlalweni kude kube kufikelelwe kwinjongo yokuphelisa iqela ngalinye. Fortnite iyafumaneka yeyakho khuphela mahala ngewebhusayithi yeMidlalo ye-Epic.
Ukuba ujonge imidlalo eyahlukeneyo, uRoblox sisihloko osifunayo. KwiRoblox esinayo Inani elikhulu lemidlalo yazo zonke iintlobo, Zonke ziyafumaneka simahla. Iyahambelana namaqhina olawulo, alungele abo badlali bakufumanisa kunzima ukudlala ngokucinezela isikrini.
URoblox uyafumaneka kweyakho khuphela mahala kwaye kubandakanya ukuthenga ukuphucula ukubonakala, ngaphandle kokunikezela ngoncedo olongezelelekileyo ngaphezulu kwabanye abadlali.
Umthuthukisi: Iqonga leRoblox
Ukuba into oyikhangelayo ngumdlalo wabadlali abaninzi lowo sukuthatha ixesha elininzi phakathi komdlalo nomdlalo, I-Brawl Stars inokuba sisihloko osifunayo, umdlalo apho amaqela ama-3 abadlali kufuneka boyise elinye iqela nazo zonke iintlobo zezixhobo.
Umdlalo uyafumaneka kweyakho khuphela mahala kwaye ibandakanya ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo, okufana nazo zonke izihloko ezikolu luhlu, ezichaphazela kuphela ubuhle babadlali, ngaphandle kokubonelela ngalo naluphi na uncedo.
Isicwangciso semidlalo ye-Android
I-Arena yeValor ibeka kuthi abalinganiswa abangaphezulu kwe-40 Ukujongana neentshaba zethu kwiimfazwe ezi-1vs1, 3vs3 okanye 5vs5 kwiimeko ezahlukeneyo. Esi sihloko siyafumaneka simahla simahla kwaye sibandakanya ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo.
Eyona midlalo ilutha kakhulu kwi-Android
Indawo yeValor: Arena 5v5
Singaqwalasela ukuba iClash Royale ifana ne- Inxalenye yesibini yeClash of Clans, umdlalo ojamelene nabadlali ababini ebhodini apho kuya kufuneka banike konke okusemandleni abo ukugqiba abo bakhuphisana nabo ngokutshabalalisa zonke izakhiwo zabo nokususa abachasi babo.
Ukuba endaweni yokujongana neentshaba zakho ufuna ukuyila eyakho intolongo apho zigcina khona iintshaba zethu kwimilo yethu yamabanjwa, umdlalo owufunayo kuMgcini weDungeon, umdlalo oza kusivumela nilwe nabantu abakhohlakeleyo bazo zonke iintlobo. Esi sihloko siyafumaneka simahla ngaphandle kwentlawulo.
Umthuthukisi: AMAHRITHI AMANZI
Imidlalo yeqonga ye-Android
IAlto's Adventure kunye neAlto's Odyssey
Ukuba u khangela Umdlalo weqonga ngomculo opholileyoKuya kufuneka uzame iAlto's Adventure kunye neAlto's Odyssey. Yomibini le midlalo isinika umdlalo ofanayo kodwa kuseto olwahlukileyo kunye nomculo ongasemva. Sifuna umnwe kuphela ukunqanda imiqobo esiyifumana endleleni.
Umthuthukisi: I-Noodlecake Studios Inc.
URayman weklasikhi akanakuphoswa kukudityaniswa kwemidlalo yeqonga, umdlalo owalayo ukufa kwaye ibisemarikeni ngaphezulu kweminyaka engama-30. Esi sihloko sibeka kuthi inani elikhulu lehlabathi apho kufuneka sivavanye amandla ethu kunye nokukwazi ukuphepha iintshaba.
Iimidlalo ezili-14 eziphambili ze-Android
I-Rayman Adventure iyafumaneka simahla kwaye ibandakanya ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo.
Umthuthukisi: Ubisoft Entertainment
URayman Jungle Run
ixabiso: € 1,09
URayman Fiesta Run
Umdlalo iya ngaphaya kobuhle obuqhelekileyo bemidlalo yeqonga yi-Badland, apho, kungekuphela nje ekufuneka satsiba kodwa kufuneka sicinge ngamanqanaba ayi-100 asinika wona. Esi sihloko, esifumaneka kwi-PC, siyafumaneka simahla simahla, kubandakanya iintengiso kunye nokuthenga ngaphakathi nohlelo ukuvula ukufikelela kuwo onke amanqanaba.
Imidlalo yeAventure yeAroid
I-Minecraft ngumdlalo ekufuneka senziwe kuwo sivelisa iingcinga zethu, ngokukodwa okanye nabahlobo.
Eyona midlalo ifana neMinecraft
Yakha iinqaba, yenza ilali, unakekele imfuyo, tyala imifuno, uzikhusele kwizidalwa zasebusuku, hlola imeko-bume yakho ukhangela izixhobo ... Umdlalo obalulekileyo, nokuba ungakanani na.
ixabiso: € 7,49
Esi sihloko sisisa eTeyvat, ilizwe elimnandi zizele zizidalwa Kuzo zonke iintlobo apho kufuneka sijonge iimpendulo kwezi Zisixhenxe, oothixo abalawula eli hlabathi. Esi sihloko, esifumaneka kwi-PC nakwii-consoles, siyafumaneka simahla kwaye sibandakanya ukuthengwa komdlalo.
Umthuthukisi: miHoYo limited
Saga yokugqibela yeFantasy
Ukuba uyasazi esi sihloko, asinanto ingako sinokuyithetha ngayo ongayaziyo. KwiVenkile yokudlala esinayo Inani elikhulu leenguqulelo zale sagaEwe, azibizi ixabiso eliphantsi. Umdlalo weqonga wezixhobo eziphathwayo uphumelele kuba kufuneka ucofe kwiscreen ukuvavanya izakhono zethu.
IXESHA LOKUPHEPHA LOKUPHATHWA KWEMFUNASHI
Umthuthukisi: SQUARE ENIX Co, Ltd.
IXESHA LOKUPHELEKILEYO XV POCKET EDITION
ixabiso: € 22,99
UMGANGATHO WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA (3D YENZA)
ixabiso: € 16,99
ISIQINISEKISO SOKUGQIBELA SOKUGQIBELA
Isikhundla seNkohliso eMnyama
Intlango eNtsundu eseMnyama sesinye isihloko esifumaneka kwi-PC nakwii-consoles. Eli wonga libeka kuthi Ihlabathi elimangalisayo le RPG elinemizobo ebalaseleyo apho kufuneka sivavanye ubuchule bethu kunye nezakhono zabalinganiswa bethu ekulobeni, ekuzingeleni, ekusebenzisaneni. Intlango emnyama kwi-Intanethi iyafumaneka simahla kwaye ibandakanya ukuthengwa komdlalo.
Umthuthukisi: I-PEARL ABYSS
I-Asphalt 9: Imithetho
Nge-Asphalt 9: Iintsomi, i-EA itshintshe imodeli yomdlalo ebiphumelele kwiinguqulelo zayo zangaphambili. Nangona kunjalo, isisisihloko esihle kakhulu ukuba unomonde wokulinda phakathi kwemidlalo ngaphandle kokuchitha i-euro enye.
Eyona midlalo mihle yokubaleka ye-Android
Esi sihloko ivumela ukuba siqhube ezona moto zikhawulezayo kwaye zibiza kakhulu emhlabeni ukukhuphisana nabanye abadlali. I-Asphalt 9: Iintsomi ziyafumaneka ukhuphelo simahla kwaye kubandakanya ukuthenga ukuqhubela phambili ngokukhawuleza kumdlalo.
Umthuthukisi: IGameloft SE
I-Asphalt 8: Ukuhamba ngomoya: Ukhuphiswano olukhawulezayo lwe-Intanethi
Ukuba uyamthanda uMario Kart kuya kufuneka uzame le uguqulelo olukhutshwe nguNintendo emkhonweni izixhobo eziphathwayo, umdlalo oza kukuvumela ukuba ubonise izakhono zakho zokuqhuba kunye nabalinganiswa abaqhelekileyo abavela kwilizwe likaMario. Umdlalo uyafumaneka ukhuphelo simahla kwaye kubandakanya ukuthenga ngaphakathi nohlelo.
Umthuthukisi: Nintendo Co., Ltd.
I-classic evela kwi-90s ekwafumaneka kwi-Android yiCarmageddon, apho kufuneka soyise iintshaba zethu kwisithuthi ngelixa sibaleka kwelona nani likhulu labantu kunokwenzeka. Ngenxa yokudlala kwayo, esi sihloko senzelwe abantu abangaphezulu kweminyaka eli-18 ubudala.
Umthuthukisi: Amagama eGama
Imidlalo yezemidlalo ye-Android
Ngebhola ekhatywayo yeFIFA ungakwazi uyonwabele imidlalo entle kumazwe amaninzi ngendlela emnandi kakhulu enkosi ekusebenzeni kakuhle kwemizobo, nangona kusikelwe umda kusengqiqweni kwesixhobo esiphathwayo. Lo mdlalo usivumela ukuba sithathe inxaxheba kwezona tumente zidumileyo ehlabathini ezifana neChampions League okanye i-Europa League. Ibhola ekhatywayo yeFIFA iyafumaneka simahla kwaye ibandakanya ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo.
Esinye isihloko esimnandi esivela kubafana kubuGcisa be-Elektroniki (umphuhlisi ofanayo neBhola ekhatywayo yeFIFA) yi-NBA Live, umdlalo osivumela ukuba sonwabe kwimidlalo yeligi yebhola yomnyazi enkulu emhlabeni Imidlalo ye-3v3 okanye ye-5v5. Xa kuziwa ekudaleni iqela lethu, sinokhetho lokukhetha zombini iintsomi kunye nabadlali ngaphandle kwekholeji.
NBA Live mfono Basketball
Imidlalo yekhadi ye-Android
Sinokubiza esi sihloko a I-League of Legends ijikeleze (Ivela kumvelisi omnye) osinika umdlalo oguqulelwe ngokupheleleyo kwiSpanish, kubandakanya namazwi (into edlalwa yimidlalo embalwa kakhulu).
Eyona midlalo ilungileyo yamakhadi kwiselfowuni yakho
Kwiintsomi ze-Runeterra kufuneka sikhusele amanqaku enqaba yethu ngaphambi kokuba utshaba lwethu lwenze. Esi sihloko siyafumaneka ukhuphelo simahla.
Umthuthukisi: Imidlalo yeRiot, Inc
Enye ye Imidlalo yamakhadi amadala Ngaphakathi kwendalo ehambayo yi-Heartsone, umdlalo onoluntu olubanzi kwaye waba ngowona mdlalo ubalulekileyo kolu hlobo. Ukuba ujonge umdlalo wekhadi opheleleyo kunye nenani elikhulu lokukhetha, esi sisihloko osifunayo.
Umthuthukisi: IBlizzard Entertainment, Inc.
Imidlalo ye-Puzzle ye-Android
Umdlalo osikiweyo wentambo ubeka konke esinako amanqanaba angaphezu kwe-425 Kuyo kufuneka sinqumle intambo ukufumana elona nani liphezulu leenkwenkwezi kwaye sikwazi ukuvula amanqanaba amatsha anomdla komnye weyona midlalo inikezelwe kwimbali.
Sika intambo EMAHHALA
Mazes kunye nokunye
Ukuba uthanda ii-mazes ngalo mdlalo weklasikhi uyakuyonwabela kakhulu. Yenzelwe ukudlala wedwa ujonge indlela eya enkululekweni kuba ivavanya ukuqonda kwethu kwaye, kuxhomekeke kwindlela esiyithatha ngayo, inokusinceda siphumle okanye sibe nesiqalo esitsha. Lo mdlalo usinika iindidi ezi-6 zemazes kunye noyilo olunamacala amabini oluya kusenza silibale ngezinye iinkqubo ze-3D apho kunzima ukufumana indlela.
Umthuthukisi: Imidlalo yeLeo De Sol
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » Imidlalo ye-Android » 24 Imidlalo ebalulekileyo ye-Android ongenakuphulukana nayo kwiselfowuni
Ezona zixhobo zibalaseleyo zokubhala idayari yakho kwi-Android